Inkqubo yokuhambisa – Ifanitshala yeBaothian Co., Ltd.
Injongo yalo mgaqo-nkqubo kukuqinisekisa ukuba omabini amaqela ayawuqonda kwaye uyavumelana nalo mgaqo-nkqubo ukwenzela ukukhuselana nokubeka ulindelo kwiinkonzo zethu..
Ukufumana ukuHanjiswa kwakho kuwe ngeXesha yeyona nto iphambili kuthi. Nalu ulwazi malunga neMigaqo-nkqubo yokuThumela kunye noQikelelo.
Sithumela ngaphakathi # iiyure emva kokufumana iodolo yakho, ngaphandle kwaxa kunqabile ukuba imveliso ayifumaneki okwexeshana. Uya kwaziswa nge-imeyile ukuba kufanele ukuba kube njalo kunye nomhla wokuqikelelwa kwenqanawa.
Ngexesha lenkqubo yokuphuma, Ukuhanjiswa kweentlawulo kubalwa ngokusekwe kubunzima, ubungakanani kunye nokuya kwezinto ngokulandelelana kwazo. Kwaye siya kufikelela kuwe ngeentlawulo zokuhambisa ngokuchanekileyo ngolwazi lokunxibelelana nolusinikiweyo ngexesha lomyalelo.
Nje ukuba kubalwe iindleko ezifanelekileyo zokuhambisa ngenqanawa, siya kuthumela iimpahla ngokukhawuleza.
Ngesicelo sokutshintsha idilesi yokuhambisa, singayitshintsha idilesi nangaliphi na ixesha ngaphambi kokuba kukhutshwe iodolo.
Ukuba ixesha lokuhambisa lidlula ixesha elilindelweyo, Nceda unxibelelane nathi xa sisenza uphando.
Emva kokuthunyelwa, umthengi uya kufumana ikhonkco lokulandela umkhondo abanokuthi balandele inkqubela phambili yokuhambisa ngenqanawa ngokusekwe kuhlaziyo lwamva nje olunikezwe ngumthengisi wokuhambisa.
Ukuba ufumanisa ukuba iphakheji yonakele kuhambo, ukuba kuyenzeka, nceda wenqabe ukuhanjiswa okuthe ngqo kunye nokunxibelelana nenkonzo yethu yabathengi.
Ixesha lokuposa: 2020-04-30 16:04:17